क्रेडिट लागत के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki उधारो शुल्क
के तपाईं एक व्यक्ति हो जो सधैं दुवै खुट्टा संग दृढतापूर्वक रह्यो र शायद सबै केहि जान्दछौ? तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो मामला होइन। हामी सबैले दैनिक सिक्न र आज यो बारेमा छ उधारो शुल्क, यी लागतहरू सामान्यतया नियमन गरिएको छैन किनभने किनभने उनीहरूले आशा गरेनन्। यदि तपाईंलाई पैसा चाहिन्छ भने, तपाई यसलाई बैंकमा उधार लिन सक्नुहुन्छ। बैंक त्यसपछि ऋणदाता वा ऋणदाता हो र तपाइँ सबै महत्त्वपूर्ण गुणहरूसँग परिचित हुनेछ। क्रेडिट लागत सोच्न नसक्ने हो। तिनीहरू सम्झौताको एक महत्वपूर्ण भाग हो र पनि एकत्रित छन्। यसले मुख्य रूपमा ऋणमा रुचि समावेश गर्दछ। यदि तपाईंले आवेदन पूरा गर्नुभयो भने उनीहरूले कति रद्द गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि अवस्थामा, बैंक सल्लाहकारले तपाईंलाई अनुरोध दिनेछ र ब्याजको रकम पनि समावेश गरिनेछ।
यी ब्याज दरहरू कुनै पनि स्थितिमा क्रेडिट अवधिको अवधिमा बढ्न हुँदैन। त्यसपछि त्यहाँ क्रेडिट लागत भन्दा बढी छ। त्यसैले तपाईंले अपेक्षा गर्न चाहानुहुन्छ कि बैंक थप शुल्क चार्ज गर्न। यी समावेश, उदाहरणको लागि, बीमा। अक्सर, बेरोजगारी बीमा एक क्रेडिट संग पेश गरिएको छ। यो विशेष गरी बैंकको लागि राम्रो छ जुन क्रेडिट दिइएको छ। तपाईंले क्रेडिट लागतको लागि सोध्नुपर्छ। तपाईं आफ्नो बैंक को विवरण को लागि पूछ सकते हो। त्यसैले यो ऋण पनि प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। तथापि, धेरै व्यक्ति क्रेडिटको लागतबाट डराउँछ। किनभने यी अन्ततः तपाईं भन्दा अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा भन्दा उच्च हुन सक्छ। त्यस्ता खरिदहरूमा, तपाइँ सधैँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ कि तपाइँ जान्नुहुन्छ के तपाई चाहनुहुन्छ। तपाईंलाई सधैं सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ र क्रेडिट लागतको अनुमान पनि गर्न सक्छ। तपाईंको बैंक सल्लाहकार तपाईंको प्रश्नमा कुनै पनि प्रश्नको लागि हुनेछ। जो कोही घर निर्माण गर्न वा नयाँ कार किन्न चाहन्छ भनेर जान्नुपर्दछ कि ब्याज दरले कार वा घरको मूल्यलाई महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ। त्यसोभए तपाई सधै सबै पक्षमा वजन लिनु पर्छ। कुनै वैकल्पिक छैन यदि एक ऋण मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ। यसबाहेक, यो राम्रो छ यदि तपाईसँग कसैको साथ छ कि तपाईं पैसा उधार लिन सक्नुहुन्छ। परिवार स्वीकार गर्दै यस्ता चीजहरूको लागि जिम्मेवार छ मौलिक गलत हो।
यो गलत धारणालाई थप प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन। ऋण सधैं उधारो रकमको बारेमा हो। यो मित्रहरु या घर को बैंक देखि हुन सक्छ। क्रेडिट लागत सधैं उत्पन्न हुन्छ र बचाउन सकिँदैन। त्यसैले तपाईं देख्नुहुन्छ कि चार्ज पूरा गर्न को लागी पैसा उधारो राम्रो छ। यद्यपि, तपाईंले सबै कुरालाई राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ। सबै पक्षहरूमा उचित वजनको साथ, तपाईं एक अवधारणा पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईं पूर्णतया निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाई सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईलाई अब पैसा चाहिन्छ भने, तपाईले निश्चित रूपमा के जान्नुहुनेछ। पैसाको सही तरिका प्रयोग गर्नुहोस् र केहि पनि गलत हुनेछैन। तिनीहरू केवल सही हुन सक्छन् र पछि अनुप्रयोग पश्चात्ताप गर्नुहुन्न। केवल क्रेडिट लागतको बारेमा सोच्नुहोस्, र त्यसो भए केहि पनि हुनेछैन। प्रत्यक्ष रूपमा जाँच गर्नुहोस् कि लागतहरू सबै बेरोजगारमा छन्। तपाईं यो भन्न सक्षम हुनुहुने छैन, तर यदि तपाईं सबै चीजहरू राम्ररी काम गर्नुहुन्छ, केही हुँदैन। यदि तपाईंसँग निश्चित इच्छा छ भने यो तपाईंको लागि निश्चित विकल्प हो। क्रेडिट पनि क्रेडिट लागत संग सम्बन्धित छ।
अघिल्लो लेखआपूर्तिकर्ता क्रेडिट
अर्को लेखLohmann-Ruchti प्रभाव